ANTSIRANANA : Dahalo 02 sy lehilahy 02 mpividy omby halatra voasambotry ny zandary
Lehilahy 04 izay mpangalatr’omby sy mpividy omby halatra no voasambotry ny zandary tao Antsiranana tamin’ny herinandro lasa teo. Omby halatra miisa 05 tra-tehaka niaraka tamin’ireto jiolahy. 6 avril 2020
Araka ny loharanom-baovao ny 04 amin’ireto omby ireto dia an’i Jaosabotsy izay monina any amin’ny fokontany Melivato, kaominina ambonivohitra Andranofanjava, distrikan’i Antsiranana II izay nisy nangalatra tamin’ny 15 marsa teo. Ny 01 avrily teo, hita tao amin’ny lehilahy roa antsoina hoe Toerasoa sy Herepoeky, izay samy monina ao amin’ny fokontany Ambalavola, kaominina ambanivohitra Antsiranana I ny roa tamin’ireto omby ireto.
Nosamborin’ny mpitandro filaminana ireto olona nahatrarana omby halatra ireto ary natao famotorana. Nilaza izy roa lahy fa tamin’ny lehilahy iray hafa antsoina hoe Limbesoko Albert izay monina ao amin’ny fokontany Ambalavola no nividianan’ izy ireo ireo omby halatra. Niroso tamin’ny fikarohana an’i Limbesoko Albert ny mpitandro filaminana izay voasambotra tamin’ny 02 avrily teo. Hita nifatotra teo amin’ny toerana akaiky misy ny tranony ihany koa ireo omby halatra 02 ambiny.
Naiditra am-ponja vonjy maika
Natolotra ny Fitsarana ny sabotsy teo i Limbesoko Albery sy ireo roalahy nividy omby halatra ary lehilahy iray hafa izay voarohirohy amin’ny halatr’omby ihany koa. Naiditra am-ponja vonjy maika ity farany sy Limbesoko. Ireo mpividy omby halatra kosa dia afaka nody fa tsy maintsy hiatrika Fitsarana.